China 1.6mm yekukurumidza prototype yakajairwa FR4 pcb vagadziri uye vanotengesa | Kangna
Chinyorwa mhando: FR-4
Rukoko kuverenga: 2
Min mugomba saizi: 0.40mm
Finished bhodhi ukobvu: 1.2mm
Pedzisa: tungamira mahara HASL
Solder mask ruvara: girini
Lead nguva: 8 mazuva
Rakadhindwa redunhu bhodhi chinhu chakakosha chemagetsi, iboka rekutsigira remagetsi zvigadzirwa, ndiyo inotakura yemagetsi kubatana kwezvinhu zvemagetsi. Nekuti inogadzirwa nemagetsi kudhinda, inonzi "yakadhindwa" redunhu bhodhi.
Anenge zvese zvigadzirwa zvemagetsi, kubva kumagetsi mawatch uye macalculator kuenda kumakomputa, ekutaurisa emagetsi zvigadzirwa uye zvemauto zvombo masystem, ANOSHANDISA akadhindwa mabhodhi kuitira kuti kugadzira kwemagetsi kubatana pakati pezvinhu zvacho sekunge paine zvemagetsi zvigadzirwa semaseketi akabatanidzwa. Iyo yakadhindwa redunhu bhodhi inoumbwa neyakavharidzira base ndiro, inosanganisa waya uye ndiro yekunamatira yekuunganidza yakasunganidzwa yemagetsi zvigadzirwa. Iyo ine iwo maviri mabasa ekuitisa mitsara uye insulating base ndiro. Iyo inogona kutsiva iyo yakaoma wiring, ziva kubatana kwemagetsi pakati pechinhu chimwe nechimwe mudunhu, kwete chete kurerutsa kuungana kwemagetsi zvigadzirwa, basa rekumwaya, kudzikisira iyo yechinyakare nzira yeiyo wiring basa rekuremedza, inoderedza zvakanyanya kusimba kwevashandi kwevashandi; Inoderedzawo huwandu hwemuchina wese, inoderedza mutengo wechigadzirwa, uye inovandudza mhando nekuvimbika kwemidziyo yemagetsi. Akadhindwa wedunhu mabhodhi ane yakanaka chigadzirwa kusagadzikana uye inogona kumisikidzwa kuita kuti mashandiro uye otomatiki mune yekugadzira maitiro. Panguva imwecheteyo, iyo yakazara yakadhindwa redunhu bhodhi mushure megungano debugging inogona kushandiswa seyazvimiririra yekumisikidza chikamu kuti zviitise kuchinjana uye kugadzirisa kweese michina zvigadzirwa. Parizvino, rakadhindwa redunhu bhodhi rave kushandiswa zvakanyanya mukugadzirwa kwemagetsi zvigadzirwa
Zvinoenderana nehuwandu hwenzvimbo dzematunhu, inorongedzwa kuita rimwe chete pani, maviri mapaneru uye multilayer pani. Akajairwa laminates anowanzo kuve mana kana matanhatu marara, uye akaomesesa matanda anogona kusvika akawanda madhisiki.
Zvadaro: 8.0W / mk yakakwira yekupisa conduction MCPCB yeMagetsi torch